Gam akporo Otu: Otu esi amuta ya na otu o si gbanwe | Gam akporosis
Gam akporo Otu aburula ebe ndi mmadu ama n'ahịa taa. Amụrụ afọ anọ gara aga, ụdị sistemụ nrụọrụ a nwere mgbanwe na-atọ ụtọ. Ebe ọ bụ na atụmatụ mbụ nke ụlọ ọrụ ahụ dị nnọọ iche. Ma, kemgbe ọtụtụ afọ ọ gbanwere mgbanwe ndị mere ka ọ bụrụ nsụgharị a.
Versiondị nke nwere nkwado nke ndị na-azụ ahịa. Kedu otu gam akporo Otu si ghọọ ihe ọ bụ taa? Anyi na agwa gi okwu banyere mgbanwe a na-eso. Yabụ na ịmatakwu banyere ụdị a nke sistemụ arụmọrụ, nke nwetara ọnụnọ dị ukwuu n'ahịa.
1 Mmalite nke gam akporo Otu
2 2017 na 2018: Mgbanwe na ọganiihu nke gam akporo
Mmalite nke gam akporo Otu
Mgbe gam akporo na-ewere nzọụkwụ mbụ ya na ahịa, Google nwere mkparịta ụka na ndị nrụpụta na ndị ọrụ. Ebe ọ bụ na ha malitere na ọghọm, a manyere ha ịme ụfọdụ ohere. Ya mere, ha kwere ka ndị nrụpụta mepụta akwa nke nhazi, na mgbakwunye na ịwụnye bloatware.
Nke a bụ ihe gbochiri ekwentị ime ihe Google chọrọ. Yabụ, mere mkpebi ịmepụta Android One na 2014. versiondị sistemụ maka ekwentị dị ọnụ ala, na ahịa na-apụta, ihe bu gam akporo Go ugbu a. Nke a bụ ihe nwere mmetụta dịtụ mma na China.
Mana na 2015 ụlọ ọrụ ahụ kpebiri ịgbanwe usoro nke sistemụ arụmọrụ a. Yabụ n'afọ a, ha kwere ka onye nrụpụta ọdịda anyanwụ izizi mepụta ma bido ekwentị gam akporo One. Spanishlọ ọrụ Spanish BQ bụ nke mbụ n'ikwu nsọpụrụ. Nkọwapụta ekwentị ahụ siri ike, mana ọ nwere uru ịnweta nnweta ngwa ngwa.
Mana ị nweghị ike ikwu na ekwentị a, Aquaris A4.5, gara nke ọma. Ihe nwere mmetụta dị ukwuu na ụlọ ọrụ ahụ. Maka na 2016 bụ afọ nke Gam akporo Otu enwekarị ọ bụla ọnụnọ na ahịa. N'ezie, ọ bụ naanị ụdị abụọ ka ewepụtara n'ụlọ ahịa nwere ụdị a.
2017 na 2018: Mgbanwe na ọganiihu nke gam akporo
2017 bụ afọ nke nnukwu mgbanwe maka gam akporo Otu. N'ime afọ a niile, ọ bụ naanị ekwentị atọ nwere ụdị sistemụ arụmọrụ rutere n'ahịa. Ma, otu n'ime ụdị ndị a bụ maka mgbanwe na ike nke nsụgharị a nwetara n'ahịa. Kedụ ekwentị anyị na-ekwu maka ya? Ọ bụ ihe gbasara Xiaomi Mi A1.
Na mgbakwunye na ịbụ ihe dị mkpa maka ndị na-emepụta China, Ọ hapụrụ na mgbanwe dị mkpa na gam akporo Otu. Ọ hapụrụrịrị anyị njigide nke ihe ụdị nke sistemụ arụmọrụ chọrọ. Ebe ọ bụ na ha hapụrụ ekwentị ndị dị ala, ịkụ nzọ na ụdị ndị ka mma, etiti etiti na njedebe dị elu.
E webatakwara ụfọdụ atụmatụ dị mkpa. Ekwentị kachasị elu, mana iji ụkpụrụ Google. Nke a bụ site ugbu a na igodo gam akporo Otu. anyị na-achọta usoro dị ọcha, na-enweghị nhazi onwe ma ọ bụ bloatware, jiri ngwa Google ahọrọ. Na mgbakwunye, ọdịdị nke mmelite ka mma. Ebe ọ bụ na e nwere afọ abụọ nke usoro mmelite na afọ atọ nke nche patches.
Ọ bụrụ na ekwentị a malitere na 2017, ọ bụ nnukwu nkwado maka gam akporo Otu, Afọ 2018 bụ afọ nke o jiri guzosie ike n'ahịa. Afọ juputara na ihe ịga nke ọma. Ebe ọ bụ na anyị na-ahụ ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ụdị nwere ụdị a taa. N'ezie, ụdị dịka Nokia jiri ya na ekwentị ha niile. Na ngụkọta, ekwentị ọhụrụ 15 ruru ahịa nke jiri ụdị sistemụ arụmọrụ a.
Offọdụ ekwentị ndị ebidola n'ụlọ ahịa na 2018 niile na gam akporo One dị ka sistemụ nrụọrụ ha bụ:
Motorola Moto Otu
LG G7 Otu
N’enweghị mgbagha ọ bụla, evolushọn ọ gabigara abụrụla nke kachasị adọrọ mmasị. Yabụ anyị ga-ahụ ihe ha hapụrụ anyị n'afọ 2019, afọ nke etolite etolite na 2018 kwesiri ka eme ka o sie ike.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Gam akporo Otu: Mmalite na mmalite nke ụdị sistemụ arụmọrụ
A gaghị ewepụta Huawei P30 na MWC 2019